Rasaasa News – QabriDahare oo Dad Lagu Xidhay
QabriDahare oo Dad Lagu Xidhay
on April 19, 2014 12:12 am
Jijiga, Apr 19, 2014 – Todobaadkii la soo dhaafnay waxaa magaalada Qabridahare lagu xidhay qaar ka mid ah shacabka magaalada. Tirada dadka la xidhay ayaa naloogu sheegay in ay tahay 31 ruux, oo ka mid ah shacabka magaalada.
Ma cada sababta dhabta ah ee ka dambaysa xadhiga shacabka magaalada Qabridahare, laakiin warar lugeedyada laga helayo magaalada Qabridahare, waxay sheegayaan in dadka la xidhay ay la ehel yihiin xubno ka tirsan ururka ONLF.
Hore waxaa degaanka caadi ka ahaan jirtay in la xidho ehelada xubnaha ururka ONLF, in kasta oo ay hoos u dhacday tirada xadhigu labadii sano ee u dambaysay. Lama garanayo sababta soo celisay xadhiga la xidhiidha ehelada xubnaha ONLF, ee degan magaalooyinka degaanka.
Magaalada Qabridahare waxay ka mid tahay magaalooyinka uu degan yahay shacab yar, arintaas oo ay sababtay dhibaatooyinka xooga leh ee saaraan oo keentay in magaalada ay ka hayaameen dadkii deganaa.
Madaxwaynaha degaanka oo safar ku soo maray magaalada Qabridahare todobaadkan, ayaan waxba ka odhan xadhiga dadkan shacabka lagula kacay, mana jirto cid cabasho u gayn karta.